Diabe sy làlana miafina an-tampon'ny Kildare hijerena - IntoKildare
Torolàlana sy hevitra momba ny dia
Dia an-tongotra miafina any an-tampon'i Kildare nojerena
Athy, Clane, Kildare, Newbridge, fianakaviana, mpivady, Ireo tia ny tantara, Mpitady Adventure, Vatosoa miafina, Mpankafy any ivelany
Miaraka amin'ny “fahavaratra ivelany” hafa eny amin'ny faravodilanitra, tsy misy izany zavatra izany satria be loatra ny dia. Raha toa ka tsy mahita resaka traikefa nahafinaritra ny dian-tongotra mahazatra nataonao ary mitady zava-baovao ianao dia aza mitady lavitra intsony satria hizara ny tsiambaratelo nafenin'i Kildare tsara indrindra eto ambany izahay.
Saraho ny toerana dimy voalohany hahitana hijerena bebe kokoa ireo làlana miafina any Kildare.
Ho an'ny mpankafy tantara sy maritrano: The Barrow Way
Na eo aza ny maha-vatosoa miafina azy, ny Barrow Way manana ny lazany ho iray amin'ireo làlana an-tongotra tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena. Manomboka any Lowtown, County Kildare, ny làlana feno dia mivelatra mandritra ny 114km, manarona ny ampahany amin'i Kilkenny, Laois ary Carlow eny am-pandehanana.
Ny tongotra Kildare amin'ny dia dia mamaky tanàna sy vohitra manan-tantara toa an'i Robertstown, Rathangan, Monasterevin ary Athy, ary manome fahitana mahatalanjona amin'ny Hill of Allen sy ny Mount Wicklow. Miaraka amin'ny fahitana marobe ara-tantara sy ara-maritrano marobe koa aseho mandritra ny lalana rehetra, ilay làlana dia manolotra fahitana tsy manam-paharoa momba ny lasa mahavariana an'i Irlandy.
Ho an'ny fianakaviana rehetra: Reserve Pollardstown Fen Nature Reserve
Tsy afaka nilaza lalana tsara tarehy any Kildare izahay raha tsy nivily lalana Fiarovana ny natiora Pollardstown Fen. Any amin'ny 3km miala an'i Newbridge no misy azy, dia faritra voatokana hiarovana azy io, miorina amin'ny tanimboly alkaly 220 hekitara. Fahita fahita any Irlanda sy Eoropa Andrefana, misy flora sy zavamaniry tsy manam-paharoa sy maro karazana, izay azon'ny mpitsidika ianarana mandritra ny traikefa.
Toerana milamina tsy jeren'ny Hill of Allen eny lavitra eny, misy làlana maro azo zahana manerana ny fen, miaraka amina fitsangantsanganana mihetsiketsika mahaliana manamorona ny arabe mitaingina.
Na dia raisina an-tanan-droa aza ny alika dia tsy maintsy tazonina ho lohany amin'ny fotoana rehetra izy ireo ary tokony harahina miaraka aminao ny kitapo fako alika satria tsy afaka ariana eo an-toerana. Ny ankizy koa dia tsy maintsy arahi-maso mandritra ny fitsidihana, indrindra rehefa eny amin'ny arabe.
Fa manamboatra andro iray amin'izany: ny lemaka Curragh
Mivelatra manerana ny 5,000 hektara avy ao amin'ny tanàna Kildare ka hatrany Newbridge, Ny lemaka Curragh no faritra be ahidrano ambany indrindra tsy voahidy any Irlandy, ary iray amin'ny fotokevitra feno.
Satria lemaka misokatra izy io, dia afaka mandeha amin'ny lalana rehetra ianao. Ireo izay manomboka am-piandohana dia ho faly mahita ny sasany amin'ireo soavaly mitaingina any Irlandy mitaingina am-baravarana, raha ny mpandeha hariva kosa dia ho hitan'ny masoandro mody mahagaga any Kildare.
Ny Curragh dia vatosoa tsy fahita firy amin'ny lafiny maha-zava-boahary sy ara-kolontsaina azy, miaraka amin'ireo mpitsidika simba amin'ny safidy raha ny tontolon'ny asa sy ny hetsika maro no atolotra. Ny mariky ny Kildare malaza koa dia misy ny Curragh Pacecourse, Tranombakoka Miaramila, Farm Farm Karibu ary klioba golf tranainy indrindra any Irlanda, ny Royal Curragh Golf Club.
Noho ny fahaverezana ao anatin'izany rehetra izany: The Kildare Maze
Ho an'ny fahafinaretana tsy azo ihodivirana ao amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny bonus fanampiny misy fomba fijery mahavariana, Ny Maze Kildare dia tsy maintsy atao ho an'ny fianakavian'ny mpianakavy alahady amin'ity fahavaratra ity. Miaraka amin'ny lalana 2km mihoatra ny fefy hekitara 1.5 hektara ireo mpitsidika dia atambatra ny mpitsangatsangana mba hahita ny lalana mankany amin'ny tilikambo fijerena eo afovoany an'io maze be io.
Ny fahitana any Panoramika ambanivohitra Kildare dia azo jerena avy amin'ny tilikambo fijerena, izay manome topy maso topy ny drafitry ny maze. St Brigid, ilay olo-masina mpiaro an'i Kildare, no aingam-panahy tamin'ny famolavolana, izay mampiditra ny hazo fijalian'i St Brigid miorina amin'ireo quadrants efatra an'ny maze.
Miaraka amin'ny maze hazo, tariby zip, golf goavambe ary fampianarana manafika ihany koa, ny Kildare Maze dia handeha amin'ny dingana manaraka!
Ho an'ireo tia natiora sy biby: Liffey Walk - Clane sy River Liffey Circular
Mety ho an'ny fijerin'ny vorona sy ny bibidia, ny Clane sy renirano Liffey boribory dia traikefa nahafinaritra ho an'ireo izay te hifandray amin'ny natiora. Ilay làlana mandeha mihodinkodina dia mandrakotra mihoatra ny 6km ary misy endri-tsoratra mahaliana maro amin'ny làlana, ao anatin'izany ny mink, kingfishers, otter ary maro hafa.
Na eo aza ny toerana misy azy eo akaikin'ny tanànan'ny Clane be atao, ny làlana an-dalambe dia manome fandosirana mangina ho an'ireo izay mitady filaminana sy fahanginana. Ireo izay maniry ny hitondra ny volony miaraka amin'ilay traikefa nahafinaritra dia tokony hanamarika fa ny alika dia tsy maintsy tazonina ho lohalaharana amin'ny fotoana rehetra.
Ho an'ny fitsidihana lapa miaraka amin'ny fianakaviana: Mullaghreelan Wood
Toerana majika amin'ny fitsangatsanganana fahavaratra, Hazo Mullaghreelan, akaikin'ny Kilkea any County Kildare, dia sarotra resena. Ny lalan-tsambo 2.3km dia miorina amin'ny toerana mahafinaritra manodidina ny tampon'ny havoana iray, izay mitazana ny Lapan'i Kilkea mahafinaritra. Ireo tia tantara dia hiravoravo amin'ireo tantara maro mifandraika amin'ity tsangambato taloha ity, raha ireo mitady ny fanamboarana ny natiora kosa dia hahita izany ao anaty voninkazo maniry marobe manerana ny tanin'ny ala.
Ankafizin'ny ankohonana, làlan'ny fahavaratra lavorary - nefa mety ho fotaka kely rehefa tsy mandeha tsara ny toetr'andro Irlanda, ka aza hadino ny lavadrano!
AthyClaneKildareNewbridgefianakavianampivadyIreo tia ny tantaraMpitady AdventureVatosoa miafinaMpankafy any ivelany
Tari-dàlana hafa mety tianao
Voucher fanomezana amin'ny fety mahafinaritra mba hiaina ny tsara indrindra amin'ny Kildare
Ny fialan-tsasatra farany romantika any Kildare
Magical Krismasy matanjaka ao Kildare Hotels
Vatosoa miafina 5 ao Kildare izay tsy ho hitanao ao amin'ny boky mpitari-dalana
Kildare ho an'ny fikarakarana tena
Toeram-pisakafoanana ambony any Kildare amin'ny vanim-potoanan'ny Noely
Toerana fampakaram-bady tampon'ny County Kildare
Zava-dehibe dimy hatao amin'ny faran'ny herinandro faran'ny herinandro any Kildare
Dia an-tongotra any Kildare
Torohevitra 5 lehibe hanararaotana tsara ny traikefa Kildare Royal Canal Greenway
Famonoana afo 5 an'i Cozy Kildare hitsidika ity ririnina ity
Hetsika tsara indrindra ho an'ny zatovo any Kildare
Mamaha ny tantaran'ny 5,000 taona tao anatin'ny fito andro fotsiny
VOTE: Aiza ny chipper tsara indrindra an'i Kildare?
Midira amin'ny The Cavalry along the Ireland's Warriors and Heros
Mikaroha tantaram-pitoviana amin'ny harena sy ny fahantrana
Traikefa amin'ny loza, fandresena ary ny fiaretana
Mandositra mankany K Kildare ny lehibe (olon-dehibe)
Mandehana amin'ny làlana ara-panahy manerana an'ity Bastion Kristiana voalohany ity
Làlan'ny natiora 5 tsara indrindra any Kildare
Manontany tena amin'ny mpamosavy sy fampakaram-bady any amin'ny Tany Saint-Laden
Jereo ny andriamanitra masoandro, ny làlambe Bog ary ny mpanjaka avo angano